Nabad Iyo Naf -Qaybsi Shirka Somaliland iyo Somalia | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	6:07 pm | Posted by kayse Nabad Iyo Naf -Qaybsi Shirka Somaliland iyo Somalia
Salaan Madax da iyo Shaqaalaha Togdheernews iyo dhamaan dad ka reer Somaliland meel kasta oo ay ku nool yihiin.
Maqaalkan oo ku salaysan is waydiin ta; Maxaa laga fili karaa shirka Som/land iyo Som/liya ee Imaarada ka socda.
Anaga oo ah qurba joogta reer Som/Land:
Waxaanu taageero buuxda u diraynaa wafdiga reer Somaliand ee ka qayb gelaysa shirka dubai.
Ka dib markii ay noqotay laga maar maan in S/Land ka qayb gasho shirar ka khuseeya arima Som/Land iyo Somalia.
Waxaa is waydiin mudan halkaa xaal marayaa ama se qadiyadii goni isutaaga Somaliland halkay maanta maraysaa.
Waxa dad badan oo reer Soamliland ahi aaamin san yihiin in ay shaqadu wanaagsan tahay mahad ilaah baa iska leh.
Hada ba marka aynu og nahay halka laba dhinac kala joogaan S/land iyo S/lia.
Maxaa laga filan karaa shirkan Emaratka?
Waxay dad badani qiyaasa yaan in miisan ka la saari doono laba dhinac; dhinaca sadexaad na dib loo dhigan doono. Laba da dhinac oo noqon doono nabad gelyada oo layska kaashashado iyo Caawimooyinka iyo arimaha dhaqaale oo laba lagu qaybsado.
Dhina S/land waxaa ugu jira iftiin siyaasadeed; Madax banaani caawimo, dhaqaale iyo wax barasho.
Dhinaca kale oo S/lia amase Sheikh Shariif na waxaa ugu jira magac siyaasadeed in uu yahay madax waynihii Somaliland miiska wada hadal keenay;
Waxaa kale oo jirta in ay yar tahay fursada in shirka lagu kala dareero ama lagu kala kaco.
Suleiman Adan Dheere